🥇Best CySEC စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပွဲစားများ ဇူလိုင် 2022 | ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန် ၂ ခုကို လေ့လာပါ။
2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများ
အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသောပွဲစားတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကဲ့သို့ CySEC ပွဲစားသင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်အရင်းအနှီးအတွက် လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်တစ်ခုကို ဖန်တီးနေပါသည်။ ကုန်သည်များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည့်အခါ ငွေဆုံးရှုံးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ဤဂိမ်းတွင် မျှော်လင့်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုရွေးဖို့ ကြုံလာတဲ့အခါ ပှဲစားလိုင်စင်အပြည့်အစုံကိုရွေးရန်အရေးကြီးသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အွန်လိုင်းပွဲစားထောင်ပေါင်းများစွာရှိပြီးတစ် ဦး စီသည်၎င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပြနာမှာသံသယရှိသူကုန်သည်များကိုအမြန်ထွက်ခွာရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောလိမ်လည်သူများရှိခြင်းဖြစ်သည်။
CySEC သည် MiFID (Financial Instrument ညွှန်ကြားချက်ရှိစျေးကွက်များ) မှချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းအားလုံးကိုလိုက်နာသည်။ MiFID စည်းမျဉ်းများမရှိလျှင်ကုန်သည်များသည်အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေ၊ အထောက်အထားလိမ်လည်မှု၊ ငွေခဝါချခြင်းနှင့်ခိုးယူခြင်းများကဲ့သို့သောအရာများနှင့်အကာအကွယ်မရကြပါ။
ဤစာမျက်နှာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် CySEC ပွဲစားကိုရှာဖွေသောအခါတွင် သတိထားရမည့်အချက်များအားလုံးကို ဖြတ်သန်းသွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်သည့်အရာမှ ဤပွဲစားအမျိုးအစားမှတစ်ဆင့် သင်ကုန်သွယ်မှုလုပ်နိုင်သည့်အရာအထိ အရာအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ လွှမ်းခြုံထားပါသည်။ နိဂုံးချုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးပါမည်။ 2022 ခုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများ.
CySEC သည် 'ဆိုက်ပရပ်စ်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကော်မရှင်' ကိုကိုယ်စားပြုပြီးအွန်လိုင်းဘဏ္sectorာရေးကဏ္forအတွက်ပထမဆုံးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအခွင့်အာဏာရှိခဲ့သည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ဆိုက်ပရပ်စ်တွင်အခြေစိုက်ပြီးအစိုးရအတွက်အကြီးမားဆုံးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည် ထို binary options များ နှင့် Forex ပွဲစားများ။ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကလိုင်စင်ရထားတဲ့အွန်လိုင်းအာကာသထဲမှာပွဲစားတွေတကယ်ရှိတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ဆိုက်ပရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံသည်ဥရောပသမဂ္ဂသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, အမှုအရာဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များအတွက်ပြောင်းလဲလာတယ်။ ဥရောပပါလီမန်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်တိုက်ကြီးရှိဘဏ္theာရေး ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုတစ်ပြိုင်တည်းညှိနှိုင်းနိုင်ရန်အတွက် MiFID ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီပြီးလိုက်နာရမည့်စံနှုန်းများကိုဖော်ပြသည်။
အချို့အွန်လိုင်းပွဲစားများသည် နှစ်ခုစလုံးမှလိုင်စင်ရှိသည်ကို သင်သတိပြုမိပေမည်။ CySEC နှင့် အ FCA (Financial Conduct Authority) ဖြစ်သော်လည်း အချို့မှာ တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ FCA ကဲ့သို့ပင်၊ CySEC သည် ပွဲစားအဖွဲ့အစည်းများအား လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဤအဖွဲ့သည် စည်းကမ်းမလိုက်နာသော မည်သည့်ပလက်ဖောင်းများကိုမဆို ပိတ်ဆို့အရေးယူရန် ပါဝါလည်းရှိသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီအကြားငွေထုတ်ယူခြင်းနှင့်အပ်ငွေများအပါအ ၀ င် CySEC ပွဲစားမှပြုလုပ်သောငွေပေးငွေယူတစ်ခုစီကိုအပြည့်အ ၀ ကြီးကြပ်သည်။ CySEC ပွဲစားများသည်နှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရသည်။
CySEC ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာလူတိုင်းအတွက်ပုံမှန်နှင့်မျှတသောဘဏ္marketာရေးစျေးကွက်တစ်ခုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောစျေးကွက်များဖြစ်သော Forex၊ CFDs နှင့် OTC (ကောင်တာကျော်) ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်အဓိကထားသည်။
ပွဲစားများ CySEC ခွင့်ပြုချက်အဘို့အဘယ်သို့သောအခြေအနေများတွေ့ဆုံကြသနည်း
CySEC ပွဲစားများအတွက်လိုင်စင်ရယူရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ ပြီးနောက်၊ လိုက်နာရန်လမ်းညွှန်ချက်များစွာရှိသည်။ သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကဤအရာသည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လိုင်စင်ရပွဲစားတစ် ဦး သည်ဖောက်သည်များမပြုလုပ်မီသူတို့၏တန်ဖိုးနှင့်တရားမျှတမှုကိုသက်သေပြရလိမ့်မည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည်ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာနှစ် ဦး လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းလိုပါက CySEC ပွဲစားများသည်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူနှင့်ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းပြောရလျှင်ပွဲစားပလက်ဖောင်း၏ရှုထောင့်တိုင်းကိုအများပြည်သူသို့ထုတ်ကုန်အဖြစ်မကမ်းလှမ်းမီစစ်ဆေးပြီးစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရမည်။ အနည်းဆုံးလူတစ် ဦး အားပွဲစားလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်တရားဝင်ခွင့်မပြုကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများ၏မျှတမှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ကာကွယ်မှုတစ်ခုထပ်မံပေးသည်။
လိုင်စင်ရပွဲစားများသည်ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းချမည့်ဘဏ္allာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အသေးစိတ်စာရင်းအပါအဝင်လိုင်စင်ရအဖွဲ့အစည်းသို့၎င်းတို့၏အစီအစဉ်များကိုအတိအကျစီစဉ်ရမည်။
AML သည် 'ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး' အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး CFT သည်အကြမ်းဖက်မှု၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်တိုတောင်းသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည်ဌာနတစ်ခုနှင့်ဤဌာနသည် CySEC ၏လိုက်နာမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ CySEC ပွဲစားများသည် sign up လုပ်သော client တိုင်းနှင့် KYC (Your Customer Customer) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဖြတ်သန်းရမည်။ ဤသတိမထားမိသောအရာတွင်၎င်းတွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ နာမည်အပြည့်အစုံနှင့်လူနေအိမ်လိပ်စာနှင့်ဖောက်သည်၏ငွေကြေးအခြေအနေနှင့်ကုန်သွယ်မှုသမိုင်းပင်ပါဝင်သည်။ တူညီတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအားလုံးမှာအကျုံးဝင်တယ် - ဒါကြောင့်သင်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူး၊ CySEC ပွဲစားပလက်ဖောင်းတစ်ခုကသင့်ကိုအကောင့်တစ်ခုအတွက်စာရင်းမသွင်းခင်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုသက်သေပြရမယ်။
CySEC ပွဲစားသည်ငွေကြေးတူရိယာအတုပြုလုပ်ခြင်း၊ ငွေခဝါချခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောငွေပမာဏကိုအပ်နှံထားသည့်သုံးစွဲသူတစ် ဦး ဦး ကပင်သူတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူထံတင်ပြရမည်။
ဤပွဲစားများသည်ကုန်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်“ ဖောက်သည်အန္တရာယ်ပရိုဖိုင်း” ကိုဖန်တီးရန်အရေးကြီးပုံကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်ဖောက်သည်များပေါ်တွင်ပုံမှန်ပွဲချင်းပြီးစစ်ဆေးခြင်းအပြင်။
CySEC ပွဲစားများအားလုံးသည်ဖောက်သည်များမှပေးရမည့်အခကြေးငွေအားလုံးကိုလုံး ၀ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိဆက်သွယ်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ကုမ္မဏီသည်အရည်အချင်းရှိသော 'သတင်းအချက်အလက်အသိပေးစာ' ကိုထုတ်လုပ်ရမည်၊ ၎င်းသည် CySEC ပွဲစားကုမ္ပဏီမှအခကြေးငွေများကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်နည်းဖြင့်ကောက်ယူမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ အထူးသဖြင့် CFD များဖြစ်သည်
စွန့်စားမှုထုတ်ဖော်ခြင်း၏နောက်တစ်ခုမှာ 'ဖောက်သည်အတည်ပြုခြင်း' ဖြစ်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ရှင်းပြထားသည့်အရာကိုနားလည်ရန်အတွက်ဖောက်သည်များသည်အတည်ပြုပုံစံကိုဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အသိပေးချက်ကို CySEC ပွဲစားကပေးပြီးဖောက်သည်မှနားလည်ကြောင်းဤအချက်သည်အရေးကြီးသည်။
လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် CySEC ပွဲစားများတွေ့ဆုံရန်နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုမှာနှစ်စဉ်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ စာရင်းစစ်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဤကော်မရှင်မှနှစ်စဉ်နောက်ဆုံးဇွန် ၃၀ ရက်တွင်တင်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ပွဲစားတစ် ဦး စီသည်စုစုပေါင်းလည်ပတ်ငွေကြေး၊ CySEC သို့နှစ်စဉ်ပေးရသောအထောက်အထား၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်နှစ်စဉ်အခကြေးငွေတွက်ချက်ခြင်းပုံစံများစသည့်အဓိကအချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဤသည်မှာစေ့စေ့စပ်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအတော်များများကတတိယပါတီစာရင်းစစ်များကိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောစာရင်းစစ်တွင်ကုမ္ပဏီပိုင်အရင်းအနှီးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးပါ ၀ င်ရမည်။
မကြာသေးမီက ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပြinto္ဌာန်းခဲ့သောစည်းမျဉ်းသစ်များအရကော်မရှင်သည်ဘဏ္firmsာရေးကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အသေးစိတ်ပြိုကွဲမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်; ဖောက်သည်များမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနှင့်လက်လီကုန်သည်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာတွင်ပါ ၀ င်ရမည် အနားသတ်ကုန်သွယ် အစီရင်ခံစာများနှင့်အဘယ်သို့သောသြဇာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပွဲစားသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှပြုလုပ်သောဈေးကွက်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ဖောက်သည်ကိုယ်စားပွဲစားကကွပ်ကဲသောကုန်သွယ်မှုတို့ကိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားသိမြင်ရန်လိုသည်။
အကယ်၍ ဤနှစ်ပတ်လည်စာရင်းစစ်ဆေးမှုမှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုထားခဲ့ပါက၊ CySEC ပွဲစားသည်ဒဏ်ငွေနှင့်ရိုက်ခံရမည်၊
တစ်ခါတစ်ရံရံပုံငွေခွဲခြားခြင်းဟုခေါ်သောဘဏ်အကောင့်ခွဲထုတ်ခြင်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ အထူးသဖြင့်ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်သည်။ CySEC အတွက်, ဒီစည်းမျဉ်းကိုသာ 2017 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ယခုဥပဒေတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ၎င်း၏ဖောက်သည်များပိုင်ဆိုင်သောအရင်းအနှီးကိုပိုင်ဆိုင်သောမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီမဆိုဖောက်သည်များ၏ငွေကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နှင့်ဝေးအောင်ကာကွယ်ရမည်။
ထို့အပြင်သင်၏အကောင့်ရန်ပုံငွေများသည်သူကြွယ်နှင့်မရော (ကြွေးမြီအတွက်) သေချာစေရမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလက်ထဲသို့မရောက်စေရန်လည်းကာကွယ်ပေးသည်။
CySEC ၏အဆိုအရပွဲစားကုမ္ပဏီများသည်သုံးစွဲသူသိုက်တင်ထားသောယူနစ် ၁၀၀၀ တိုင်းအတွက်အနည်းဆုံး ၃ ယူနစ်ဖြင့်ငွေများကိုခွဲထုတ်ရမည်။ ၎င်းသည်ပွဲစားကုမ္ပဏီနှင့်လုံးဝသီးခြားရပ်တည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ပွဲစားသည်စီးပွားရေးမှထွက်ရန်လုံလောက်သောကံမကောင်းပါကသင်၏ငွေသည်လုံခြုံစိတ်ချကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်။
FCA သည်ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေကို£ ၈၅၀၀၀ အထိပေးအပ်သော်လည်း CySEC သည်ယူရို ၂၀၀၀၀ ကိုသာလျော်ကြေးပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုရမည်။ ၎င်းသည်ဘာမျှမက ပို၍ ကောင်းသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မကြာမီကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။
သိသိသာသာလုံ့လဝီရိယရှိရှိထားရှိခြင်းသည် CySEC ပွဲစားများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတွင်တတိယပါတီကုမ္ပဏီများအပါအ ၀ င်ဖောက်သည်သစ်အားလုံးအတွက်အသေးစိတ်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများပါဝင်သည်။ ဤခိုင်မာသောလုံ့လဝီရိယရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပွဲစားကုမ္ပဏီ၏အုတ်မြစ်များတွင်ထည့်သွင်းသင့်သည်။ CySEC ပွဲစားများသည်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးမှုခံနေရပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်စောင့်ကြည့်သူများနှင့်တူသည် - ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်တင်းကျပ်သောသင်္ဘောတစ်စင်းကိုစီးရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့် - ဘဏ္recordsာရေးမှတ်တမ်းအားလုံးကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး သည်ရုတ်တရက်ငွေအမြောက်အများရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကပွဲစားကသတင်းပို့ရမည်ဟုအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့အနေဖြင့်အသေးစိတ်ကျသောလုံ့လဝီရိယရှိရှိအစီရင်ခံတင်ပြရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင်ငွေရှာဖွေသည့်နေရာများကဲ့သို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ့ရှိချက်များပါ ၀ င်ရမည်။
ထပ်မံ၍ ဤသည်အားလုံးသည်ဘဏ္spaceာရေးနယ်ပယ်အတွင်းဘဏ္financialာရေးရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုတားဆီးရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
ပွဲစားပလက်ဖောင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ၁: ၁၀၀၀ အထိအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုကမ်းလှမ်းသည့်အချိန်ရှိခဲ့သည်။ ကြီးမားသောဘဏ်ငွေလက်ကျန်ရှိသောကုန်သည်များ၏အနည်းငယ်သောရာခိုင်နှုန်းသည်ထိုသို့သောစွန့်စားမှုမျိုးကိုပေးနိုင်သည်။ သို့သော်လူအများစုအတွက်မူ၎င်းသည်အလွန်သွေးဆောင်ရုံသာမကဘေးအန္တရာယ်ကိုအလွယ်တကူအဆုံးသတ်နိုင်သည်။
မြင့်မားသောသြဇာသည်သင်၏အကောင့်ကိုလျှင်မြန်စွာရှင်းလင်းနိုင်ရုံသာမကသင်၏အစုစုသည်ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးနိုင်သည်။ ESS စည်းမျဉ်းများအရ CySEC သည်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကန့်သတ်ချက်များချမှတ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထိုနေ့ရက်များကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။
လက်လီဖောက်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အောက်ပါပိုင်ဆိုင်မှုအခြေပြုကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင်ရှိလိမ့်မည်။
အဓိကငွေကြေးအတွဲများ – 30:1။
အဓိကညွှန်းကိန်းများ၊ အဓိကငွေကြေးအတွဲများ၊ ရွှေ – 20:1။
ကုန်စည်များ (အဓိကမဟုတ်သော ရှယ်ယာများနှင့် ရွှေများ မပါဝင်) – ၁၀:၁။
အခြားရည်ညွှန်းတန်ဖိုးများနှင့် တစ်ဦးချင်းရှယ်ယာများ – 5:1။
Cryptocurrency – 2:1။
ဟုတ်ပါတယ်, သြဇာနှင့်အတူ, သင်ဆုံးရှုံးဖို့အများကြီးရှိသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသင်၏လမ်းအတိုင်းသွားလျှင်သင်အမြတ်များစွာရနိုင်သည်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်ကသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်သတ်မှတ်ချက်ကိုသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖြစ်တယ်။
အဘယ်အရာကို rot ကာကွယ်မှုများ ‌Does yCySEC‌ ffOffer? ‌ ‌
တိုတောင်းသောအဘို့'Investor လျော်ကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ 'သို့မဟုတ် ICF, 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းနှင့် CySEC. အားလုံး CySEC ပွဲစားများတရားဝင် ICF နှင့်ရလဒ်အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းနေကြသည်များကအုပ်ချုပ်သည်, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖြစ်စေတက်ကာကွယ်ထားသည် ယူရို ၂၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် ၉၀% သို့မဟုတ်အမ်မဆာဒက်မှဖုံးလွှမ်းထားသောတောင်းဆိုမှုများ - မည်သည့်ပုံစံသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။
ဒီတော့ဥပမာအနေနဲ့ - ‌let ရဲ့ပြောရရင်သင်ဟာ 60,000 ယူရို ၆၀,၀၀၀ ‌ အန ‌ တ‌က CYSEC‌ rokBroker‌ ‌and‌ ကံမကောင်းတာကတော့ ‌Broker‌ ‌goes‌ ‌ပြင်ပမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှသင်အနေဖြင့်အပြည့်အ ၀ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ရှိပါသလားယူရို ၂၀,၀၀၀ မှ ဘဏ္‌ာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများမည်သို့ပင်ဆိုစေ၊get‌ ‌ € 4,500‌ ‌ (90%) ။
နှစ် ဦး စလုံး ‌CySEC‌ နှင့် FCA‌ ‌are‌ ‌also‌ ‌by‌ ‌by‌ ‌ESMA‌ ‌ (European ‌Securities‌ ‌and‌ arkMarkets‌ utAhorhority), ‌ ‌ဘဏ္‌ာရေး ဘဏ္‌ာရေး pacespace.‌ ဤနယ်မြေအုပ်စုသည်ဆုံးဖြတ်ချက်များ ‌what‌ ‌ အဖျော်ယမကာ ‌limits‌are‌ ‌ လက်ခံနိုင်စရာရှိပါသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပိုင်ဆိုင်မှုများ၌မည်သည့်သြဇာကန့်သတ်ချက်များရှိနေသည်ကိုသင်သိလိုပါကဤစာမျက်နှာကိုနောက်ထပ်စာစောင်စာရင်းတစ်ခုတွေ့လိမ့်မည်။
အဘယ်အရာကို ‌ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ‌do‌ yCySEC‌ rokBrokers‌ ll Allow‌ ‌you‌ ‌to‌ r ကုန်သွယ်ရေး? ‌ ‌
CySEC‌ rok ပွဲစားများသည်တူညီခြင်းမရှိသောကြောင့်အချို့သည်စတော့များကိုသာအာရုံစူးစိုက်နိုင်သော်လည်းအခြားသူများကစိတ်ကူးနိုင်သမျှပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်တိုင်းကိုပေးသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ CySEC ပွဲစားများကကမ်းလှမ်းလေ့ရှိသောအသုံးအများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားပါသည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးဈေးကွက်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် CySEC ‌ ပွဲစားများကကမ်းလှမ်းသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် Forex ကုန်သွယ်။ ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်သင်သည်အမှာစာများစတင်ရန်ပွဲစားသို့စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် EUR / USD သို့မဟုတ် GBP / USD ကဲ့သို့သောငွေကြေးအတွဲများကိုတစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ငွေကြေးအတွဲတွေမှာတော့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိတယ်။ အရွယ်မရောက်သေးသူနှင့် exotics ။
အသေးစားпарများ: ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှအချို့သည်အသေးစားအတွဲများကို 'Cross-Currency' အတွဲဟုခေါ်ကြသည်။ ဤအတွဲများ၏ထူးခြားချက်မှာ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ဥပမာအချို့သည် EUR / GBP၊ GBP / JPY နှင့် CHF / JPY (အနည်းငယ်ဖော်ပြရန်) တို့ပါဝင်သည်
အဓိကတာ ၀ န်များ: အဓိကအတွဲများမှာဝယ်လိုအားအမြင့်ဆုံး ဖြစ်၍ အရည်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာများ AUD / USD၊ EUR / USD နှင့် GBP / USD (များများပိုများနိုင်သည်) တို့ပါဝင်သည်။ ဤအတွဲများကို Forex ဈေးကွက်တွင်မည်သည့်အချိန်မဆိုရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
ထူးခြားဆန်းပြားသောအရာများ: ဤ Forex အတွဲများသည်အခြားနှစ် ဦး မှဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမကြာခဏရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမရှိကြပါ ပျံ့နှံ့။ ထူးခြားဆန်းပြားအားလုံးအတွက်ဥပမာပါဝင်သည်; GBP / ZAR, EUR / TRY နှင့် USD / HKD (ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်)
အချို့ CySEC‌ Forex ‌ ပွဲစားများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ပညာရေးအရင်းအမြစ်များစွာရှိသောပွဲစားအပြင်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများအမြောက်အများကိုရှာဖွေရန်အကြံပေးလိုသည်။ နှစ် ဦး စလုံး FX စျေးကွက်များတွင်အောင်မြင်မှုရရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ကန်ထရိုက်စာချုပ်များ ကွဲပြားမှုများ (CFDs) အတွက်
CFD တွေဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကိရိယာအမျိုးမျိုးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသင်ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတခုဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငွေကြေး, စတော့ရှယ်ယာ, ညွှန်းကိန်းသို့မဟုတ်ကုန်စည်။ သင်စျေးကွက်ပေါက်စျေးမြင့်တက်နေသည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်ဆိုပါစို့။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်သင်သည်“ ရှည်လျားသောခရီး” သို့မဟုတ်“ ၀ ယ်ခြင်း” လုပ်လိမ့်မည်။
သို့သော်စျေးကွက်ပေါက်စျေးသည်ကျဆင်းသွားမည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင် 'တိုတောင်း' သို့မဟုတ် 'ရောင်း' နိုင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် CFD ကုန်သည်များသည်အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကိုမပိုင်ဆိုင်ကြပါ။ သို့သော်လည်း CFD များသည်သင့်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်း (ဥပမာအက်ပဲစတော့ခ်) ကိုညှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုမှအမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် CFD များနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်မှကောက်ခံသည့်ကော်မရှင်မရှိခြင်းနှင့်ကုန်သည်များသည် ESMA ၏ယခင်ကဆွေးနွေးထားသည့်ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင်သြဇာသက်ရောက်နိုင်မှုကိုမကြာခဏရရှိနိုင်သည်။
ကုန်စည်ဈေးကွက်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီဖွင့်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်သည်မတည်ငြိမ်မှုကိုရှာသောကုန်သည်များအတွက်တကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ တကယ်တော့တချို့အချိန်ပြည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာဒီအထူးသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားကိုသာရောင်းဝယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြတယ်။
ဤပိုင်ဆိုင်မှုကိုအုပ်စုအမျိုးမျိုး ခွဲ၍ ခွဲနိုင်သည်။ သို့သော်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားအမျိုးအစားနှစ်မျိုးဖြစ်သည့်“ ခက်ခဲသောကုန်ကြမ်း” နှင့်“ အပျော့စားကုန်ပစ္စည်းများ” ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
အလူမီနီယံ၊ ကြေးနီ, ငှေ, ရှေပါလက်ဒီယမ်၊
ခဲ၊ သံဖြူ၊ ဇင့်၊ နီကယ်၊ ပလက်တီနမ်။
ရေနံစိမ်း၊ ဓာတ်ငွေ့ဆီ၊ အပူပေးဆီ။
ခဲမပါသော ဓာတ်ဆီ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့.
မုယောစပါး၊ ဂျုံ၊ ဆန်၊ ပြောင်းဖူး.
ပဲပိစပ်ဆီ၊ canola ။
သိုးမွှေး၊ ချည်၊ ရော်ဘာ။
ကုန်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်နေရာချ ‌ ကန့်သတ်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊gold‌ ‌and‌ ‌1: 10‌ ‌on‌ ‌other‌ modcommodities.‌
ကုန်ပစ္စည်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်သင်၏အစုစုကိုအမှန်တကယ်ရှင်သန်စေနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောပြီးပါက၊ သင်ကိုယ်တိုင်မကျူးလွန်မီစျေးကွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကိုကောင်းစွာနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
ရိုးရှင်းစွာထားပါ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများတွင်အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ကုန်သည်များအားခွင့်ပြုသည် (Nike သို့မဟုတ် Facebook) ။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်သင်ရရှိနိုင်သောကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်လူသိရှင်ကြားစာရင်းဝင်ပြီးဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ရှယ်ယာများကိုသက်ဆိုင်ရာလဲလှယ်မှုတွင်ရောင်းချနိုင်သည်။
သင်တစ် ဦး တည်းသာစတော့ရှယ်ယာတစ်လုံးဝယ်ရုံဖြင့်မက၊ တစ်ခုလုံးဝယ်ရန်လည်းမလိုပါ။ နောက်တစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အချို့သော CySec ပွဲစားများကသင့်အား 'အကန့်အသတ်မဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု' တွင်ပါဝင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နာမတော်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ရှယ်ယာတစ်စု၏အစိတ်အပိုင်းကို ၀ ယ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
Execution ပွဲစား - သဲလွန်စဒီတစ်ခုနှင့်အတူနာမ၌တည်ရှိ၏။ ဤပွဲစားသည်အလုပ်ခန့်ရန်မှာညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းအမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည် သငျသညျအဘယ်သူမျှမဝင်ရောက်စွက်ဖက်သို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်နှင့်အတူ။
အကြံပေးပွဲစား - ဤ CySEC ပွဲစားအမျိုးအစားသည်သင်ရရှိနိုင်သောအကျိုးအမြတ်များသို့မဟုတ်သင်၏အစုရှယ်ယာများအတွက်ကောင်းနိုင်သည့်မည်သည့်ရှယ်ယာများအားမဆိုသင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။ သင်ဝယ်သည်ဖြစ်စေရောင်းသည်ဖြစ်စေသင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လိုသလိုပွဲစား - အကယ်၍ သင်သည်အစုရှယ်ယာနှင့်အစုရှယ်ယာများကို passively အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုပါကသင်လိုချင်သောလွတ်လပ်သောပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤပွဲစားကုမ္ပဏီသည်သင်အတွက်ကုန်သွယ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးနှင့် အကယ်၍ သင်လုပ်လိုလျှင်အဆုံးသို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်။
သို့သော်သတိရပါ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်ပွဲစားများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ ထိုအပိုအလုပ်များအားလုံးသည်အပို ၀ င်ငွေများရလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပြင်မျှော်မှန်းထားတဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
ဤပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားကိုရောင်းဝယ်ရန်အတွက်အခြေခံအယူအဆမှာပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစတော့အိတ်ချိန်းတစ်ခု၏စျေးနှုန်းများကိုခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤနှင့်အခြားစတော့ရှယ်ယာများကဲ့သို့သောအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများအကြားခြားနားချက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဝယ်ယူ၍ မရပါ။ ညွှန်းကိန်းများသည်ငွေလဲလှယ်နှုန်းတစ်ခုတွင်လည်ပတ်နေသည့်အစုရှယ်ယာအမြောက်အများလှုပ်ရှားမှုကိုခြေရာခံရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။
ညွှန်းကိန်းများကိုပေါင် (သို့) ဒေါ်လာအစားအမှတ်များဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့ကို CFDs၊ Futures သို့မဟုတ် ETFs များမှတဆင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရမည်။ CySEC ပွဲစားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် FTSE 100၊ NASDAQ 100 နှင့် Dow Jones 30 ကဲ့သို့သောအဓိကညွှန်းကိန်းများကိုထောက်ခံသည်။
Cryptocurrencies‌ Bitcoin ဒီအမျိုးအစား၏အကျော်ကြားဆုံးငွေကြေးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုအများကြီးရရှိခဲ့ပါပြီ။ cryptocurrencies နှင့်ကုန်သွယ်ရန်, သင်မှန်ကန်စွာတိကျတဲ့ pair တစုံ၏မြင့်တက်သို့မဟုတ်ကျဆုံးခြင်းကြိုတင်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာ, ဒီအများကြီး Forex ကဲ့သို့လည်ပတ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, cryptocurrencies ပိုင်ဆိုင်မှုမလိုအပ်ပါဘူးသောအခြားကုန်သွယ်မှုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ဒင်္ဂါးများကိုပိုင်ဆိုင်လိုပါက၎င်းတို့ကို eToro ကဲ့သို့ပွဲစားမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဤတွင် CySEC ပွဲစားများကသင့်အားကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်လူကြိုက်အများဆုံး cryptocurrencies သည်။
ကြယ် (XLM) ။
သင် CySEC ပွဲစားအကောင့်တစ်ခုတွင် cryptocurrencies များကိုမစတင်မှီ၊ နယ်ပယ်တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်မည်သည့်ငွေကြေးနှင့်သင်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုကြည့်ရန်သရုပ်ပြသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။
အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
သိသာသည့်အချက်ကိုဖော်ပြရန်အန္တရာယ်ရှိသည်မှာ CySEC ကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းဥပဒေများမှအပြည့်အ ၀ လိုင်စင်ရသည့်ပွဲစားတစ်ယောက်နှင့်သင်စတင်ရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။
၎င်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုသာမကသင်ကုမ္ပဏီအားအပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်းသေချာစေသည် ပိုက်ဆံ - သို့သော်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလည်း ပြောစရာမလိုသည်မှာ CySEC ပွဲစားများနှင့်သင်၏ရန်ပုံငွေသည် ၂၀၀၀၀ အထိ (သို့မဟုတ်မည်သည့်ပမာဏနည်းသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏အကောင့်၏ 20,000%) အထိလျော်ကြေးပေးခြင်းအပြင်သင်၏ရန်ပုံငွေကိုရန်ပုံငွေခွဲခြားခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။
အွန်လိုင်းပွဲစားတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်ကစရမလဲဆိုတာသိဖို့ခက်တယ်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် CySEC ပွဲစားကိုသင်ရှာဖွေရာတွင်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်အချို့ကိုစာရင်းပြုစုထားပါသည်
ပွဲစားများမှကောက်ခံသောအခကြေးငွေများသည်ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်သုတေသနအချို့ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အချို့သောပလက်ဖောင်းများတွင် (ဥပမာ - eToro ကဲ့သို့) ကော်မရှင်အခကြေးငွေလုံးဝမရှိပါ။ အခြားသူများကကွပ်မျက်လိုက်သောအမိန့်တိုင်းအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရာခိုင်နှုန်းကိုသတ်မှတ်ထားသည်။
ပိုကောင်းတဲ့ ပွဲစားကုမ္ပဏီ အများစုဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘက်စုံဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ဖို့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ကာမိစေဖို့ ကော်မရှင်ခပေးဆောင်ရတဲ့အတွက် အခကြေးငွေပေးဆောင်ရမယ်ဆိုရင် စိတ်ပျက်မနေပါနဲ့။ ဥပမာအနေနဲ့၊ သင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ သင်၏ပွဲစားသည် 0.4% ကော်မရှင်ကို ကောက်ခံပါသည်။ ထို့နောက်၊ သင်သည် ထိုငွေကြေးအတွဲတွင် £1k ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်၊ သင်သည် သင်၏ပွဲစားကို ကော်မရှင်ခ £4 ပေးချေရလိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်တွင်ပြန့်ပွားခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ၀ ယ်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရဲ့ရောင်းဈေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ချက်ပါ pips).
ဥပမာအားဖြင့်၊ USD / USD ၏“ ပြန့်ပွားခြင်း” သည် ၃ ပုံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ၃ ခုတိုး။ ပင်ချိုးဖျက်နိုင်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်ဘဏ္assetာရေးပိုင်ဆိုင်မှုမည်သည့်လမ်းဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းသွားနိုင်မည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရန်ကိရိယာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သူတို့စိတ်ထဲတွင်ရှိသောမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြောင်းသေချာစေသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ CySEC ပွဲစားကိုရွေးချယ်သောအခါသင်သတိထားရမည့်အရေးကြီးဆုံးမက်ထရစ်အချို့မှာ -
အမိန့်လုပ်ဆောင်မှုအမြန်နှုန်း - အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများသည်အချိန်တိုအတွင်းမှာယူမှုကိုအမိန့်ပေးနိုင်သည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ဤအရာသည်မီလီစက္ကန်အတွင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်မည်သည့်အကောင့်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုသည်အပေါ်မူတည်သည်။
အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှု - အချို့ CySEC ပွဲစားများသည် third party ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးများကဲ့သို့အလိုအလျှောက်ဆော့ဝဲလ်ကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံသည်။
သမိုင်းကြောင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအချက်အလက် သူတို့ကစျေးနှုန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းပြန်လာလာဟုဆိုသည်။ အချို့သောကုန်သည်များကစျေးကွက်၏ ဦး တည်ရာကိုခန့်မှန်းရန်သမိုင်းဆိုင်ရာစျေးနှုန်းအချက်အလက်များကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ကျိန်ဆိုကြသည်။ ပိုကြီးမားသောမဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် backtesting နှင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေတဲ့အခါဒီ tool မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဇယားများနှင့်ညွှန်ကိန်းများ - နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများသည်ကုန်သည်များကိုစျေးနှုန်းဇယားအမျိုးမျိုးသုံးခြင်းဖြင့်စျေးကွက်စိတ်ဓာတ်ကိုဖော်ပြသည်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
သင်တစ် ဦး CySEC ပွဲစားမှအပြည့်အဝမကျူးလွန်မီ, သင်ရရှိနိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားများကိုသိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သငျသညျယခုပင် cryptocurrencies ရောင်းဝယ်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းတွင်လိုင်းဆင်း, သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်အစုစုကိုအမျိုးမျိုးနှင့်သင်၏စာရင်းထဲသို့အနည်းငယ်ထပ်မံပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းထည့်သွင်းဖို့လိုပေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သွယ်ရေး Forex ကိုအထူးအာရုံစိုက်ပါက၊ သင်ကြည့်နေသောပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်သည့်ငွေကြေးအတွဲများရှိသည်ကိုစစ်ဆေးရန်တကယ်အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ၊ အချို့သောပလက်ဖောင်းများတွင်ငွေကြေးစုံတွဲအနည်းငယ်ကိုသာဖော်ပြထားပြီးအချို့ကမူတစ်ရာကျော်ကမ်းလှမ်းသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများစွာရှိသော CySEC ပွဲစားသည်သင်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံဖြင့်ဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာ၊ သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက် ဦး တည်ချက်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ရင်၊ သင့်မှာအမိုးတစ်ခုစီအောက်မှာအရာအားလုံးရှိနေတယ်။
အပ်ငွေနှင့်ထုတ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် CySEC ပွဲစားများနှင့်ကွဲပြားသည်။ အများစုမှာအလားတူငွေသွင်းရန်ရွေးချယ်စရာများကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်း၊ သင်သတ်သတ်မှတ်မှတ်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ငွေသွင်းရန်လိုအပ်ပါက၎င်းကိုလက်ခံကြောင်းစစ်ဆေးသင့်သည်။
အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများသည်ရုပ်သိမ်းရန်တောင်းဆိုမှုများကိုချက်ချင်းနီးပါး (သို့) အနည်းဆုံးနာရီအနည်းငယ်အတွင်းလုပ်ဆောင်သည်။ ထိုသို့ပြောပြီးပါကသင်အသုံးပြုသောပလက်ဖောင်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများအားလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီငွေသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
သင်၏အကောင့်သို့ရောက်ရှိရန်ငွေပေးချေရမည့်အချိန်သည်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအပေါ်မူတည်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုပါ။ ဤဥပမာ၏အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုမှာတစ်ပတ်လောက်ကြာနိုင်သောငွေပေးချေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျချက်ချင်းကုန်သွယ်ချင်လျှင်ဒါဟာသိသာတဲ့အဘယ်သူမျှမကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှမဆို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အဆင့်သည်အလွန်အရေးကြီးပြီးအထူးသဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးတွင်ဖြစ်သည်။ ၀ ယ်ယူသူများပြားလာသော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသူတို့လိုအပ်သောအချိန်တွင်မြင့်မားစွာခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးကတော့သင် 24/7 ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်စကားပြောခန်း၊ အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်းနှင့်အဆက်အသွယ်ပုံစံစသည့်ရွေးချယ်မှုများစွာကိုရှာဖွေသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Forex၊ cryptocurrencies သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်နေပါကဤစျေးကွက်များသည် ၂၄/၇ အခြေခံပေါ်တွင်လည်ပတ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်မျှသာကမ်းလှမ်းမှုကိုဝယ်သူနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော CySEC ပွဲစားကိုစာရင်းသွင်းမည်ဆိုလျှင် - တနင်္ဂနွေတွင်ထိုအကူအညီကိုသင်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည်ပြည့်စုံသောလူသစ်တစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ ကုန်သွယ်ရေးလိုလားသည်ဖြစ်စေရွေးချယ်စရာများရှိရန်နှင့်ရရှိနိုင်သောအရာများကိုသိရန်အမြဲကောင်းပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်အချို့ CySEC ပွဲစားများသည်အစ္စလာမ်သာသနာ၏နောက်လိုက်များအတွက်အစ္စလာမ်အကောင့်များကမ်းလှမ်းသည်။ ဤအကောင့်များကိုရှရီယာဥပဒေအားအတိုးနှင့်ဆန့်ကျင်သည့် (ပေးချေရမည့်ရောအကြွေး) ကိုပါလေးစားမှုရှိစေရန်အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်ဤအကောင့်များသည်မည်သည့်အကျိုးစီးပွားကိုမျှမပေးနိုင်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုနောက်လိုက်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ရုန်းကန်နေပါကစင်မြင့်ပေါ်သို့မည်သည့်နည်းနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပွဲစားဟာသင့်အတွက်ဒီနေရာကိုလိုက်လျောညီထွေပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသင်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
အလားတူစွာ၊ သင်သည်အလွန်သေးငယ်သောပမာဏဖြင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလိုလျှင် - သင်သည် mini (0.10pips), micro (0.01pips) နှင့် nano (0.001pips) အကောင့်များကိုလေ့လာလိုသည်။ ဤအကောင့်များကိုစင်မြင့်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာမထားသော်လည်းအကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်မှုနိမ့်ဆုံးကိုထောက်ခံလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားပါက (ဥပမာ - Forex EAsသို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏ CySEC ပွဲစားသည်တတိယပါတီ၏ပလက်ဖောင်းများကိုထောက်ခံကြောင်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည် MT4။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းအနည်းငယ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏အစုစုကိုတိုးမြှင့်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင့်ပွဲစားကဒီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သေချာပါစေ။
ယနေ့ CySEC ပွဲစားနှင့်စတင်ပါ
ဤအချက်အားဖြင့်သင်သည် CySEC ပွဲစားများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုကောင်းစွာနားလည်ထားသင့်သည်။ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့်မည်သည့်ပွဲစားသည်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကိုက်ညီသည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုသေးပါကထိပ်ဆုံးအဆင့်ရှိ CySEC ပွဲစားများစာရင်းကိုထပ်မံရှာဖွေပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေသင်လျှင် များမှာ စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်မရွေးသင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုသင့်သည့်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားကျွန်ုပ်တို့အတူတကွထားရှိပြီးဖြစ်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစားသို့သွားပြီးအကောင့်ဖွင့်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်လိုအပ်သည်။ သင့်တွင်ကြိုတင်အရောင်းအဝယ်အတွေ့အကြုံရှိကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် ၂ - သင်၏ဝယ်သူအားသိရှိပါ (KYC)
သင်အရောင်းအ ၀ ယ်မပြုမီသင်သည် CySEC ပွဲစား၏ KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ CySEC စည်းမျဉ်းများအရပွဲစားများအားလုံးသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအား 'သိ' ရန်တရားဝင်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပွဲစားသည်ကုန်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
ပွဲစားကုမ္ပဏီသည်သင်၏ဓာတ်ပုံ ID (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်) လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်၏အမည်နှင့်လိပ်စာကိုဖော်ပြသည့်မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ထားသောစာရွက်စာတမ်းလိုအပ်သည်။ ဥပမာများ (နောက်ဆုံး3လမှ) တစ် ဦး utility ကိုငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်ဘဏ်ထုတ်ပြန်ချက်ပါဝင်သည်။
ထို့နောက်ပလက်ဖောင်းသည်ဤအချက်အလက်များကိုသင်နှင့်အတည်ပြုအီးမေးလ်မပို့မီသင့်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးမည်။ အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများသည်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းဤသို့ပြုနိုင်သည်။
e-wallets လိုမျိုး၊ PayPal က နှင့် Skrill.
သင်အမှန်တကယ်စျေးကွက်စီးပွားရေးအခြေအနေတွင်အရောင်းအဝယ်လုပ်လိုသော်လည်းသင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေကိုသုံးရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါကသရုပ်ပြအကောင့်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ သရုပ်ပြအကောင့်များသည်သင်နှင့်ကုန်သွယ်ရန် 'စက္ကူ' ငွေများပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ အထိရှိနိုင်သော်လည်းများသောအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
Demo အကောင့်များသည်အတွေ့အကြုံမရှိသောကုန်သည်များအတွက်သာသိုလှောင်ထားခြင်းမဟုတ်သကဲ့သို့၎င်းတို့သည်လည်းကောင်းကျိုးများအတွက်ကောင်းမွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်, သရုပ်ပြအဆောက်အ ဦ များအမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာအသစ်ထွက်စမ်းသပ်တဲ့ထိပ်တန်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သရုပ်ပြခြင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုများသည်စျေးကွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ဇယားများနှင့်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်ကိုလေ့ကျင့်ရာတွင်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
2022 ၏အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများ
သငျသညျလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်နေလျှင်, အခုအချိန်မှာန်းကျင်ကိုအကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားများ၏စာရင်းစစ်ဆေးပါ။
Capital.com သည် FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ FSA နှင့် NBRB- ထိန်းညှိထားသော အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများကို အစုအဝေးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် စတော့ရှယ်ယာများ၊ Forex၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် CFDs အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၊ အစစ်အမှန်စတော့ရှယ်ယာများကို UK နှင့် EU နိုင်ငံအချို့အတွက် ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။ သင်သည် ကော်မရှင်အတွက် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပေးဆောင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ပျံ့နှံ့မှုများသည် အလွန်တင်းကျပ်ပါသည်။ Leverage အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုလည်း ကမ်းလှမ်းထားသည် - ESMA ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ အပြည့်အဝ။
တစ်ဖန်၊ ၎င်းသည် အဓိက FX အတွဲများတွင် 1:30 ၊ အသေးစား FX အတွဲများနှင့် ရွှေတွင် 1:20၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့် ရွှေမဟုတ်သော ကုန်စည်များတွင် 1:10၊ စတော့တွင် 1:5 နှင့် crypto-ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် 1:2 တွင် ရပ်တည်နေပါသည်။ Leverage သည် ဆုံးရှုံးမှုများကို ချဲ့ထွင်စေပြီး ၀င်ငွေများကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
ပလပ်ဖောင်းသည် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်များ၊ အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ဘဏ်အကောင့်လွှဲပြောင်းမှုများကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် Capital.com ထဲသို့ ငွေရယူခြင်းသည်လည်း လွယ်ကူသည် ။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ သင်သည် 20 £/$ ကတ်ဖြင့်စတင်နိုင်သည်။
လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအကောင့်များ၏ 83.45% သည် လောင်းကစားနှင့်/သို့မဟုတ် CFDs များကို ဤဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ရောင်းဝယ်သည့်အခါတွင် ငွေဆုံးရှုံးသည်။ သင့်ငွေဆုံးရှုံးနိုင်ချေ မြင့်မားနိုင်ချေကို သင်စဉ်းစားသင့်သည်။
ဤပံ့ပိုးသူနှင့် CFD များရောင်းသည့်အခါသင်အရင်းအနှီးသည်အန္တရာယ်ရှိသည်
နာမတော်ကိုဖော်ပြသည်အတိုင်း, EuropeFX အထူးကု Forex ပွဲစားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအရာနှင့်အတူပလက်ဖောင်းသည်ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ cryptocurrencies နှင့်ကုန်စည်များဖြင့် CFD များကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ သင်သည် MT4 မှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် desktop ဆော့ဝဲလ် (သို့) မိုဘိုင်း / တက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်၏ပုံမှန် web browser မှတစ်ဆင့်သင်ကုန်သွယ်လိုပါကပွဲစားသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတိပလက်ဖောင်းဖြစ်သော EuroTrader 2.0 ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ အခကြေးငွေများအရ, EuropeFX အဓိကစွမ်းအပေါ် super- တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားပေးထားပါတယ်။ သင်၏ငွေသည်အချိန်တိုင်းလုံခြုံစိတ်ချရသည်။ အနည်းဆုံးပွဲစားသည် CySEC မှတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းအာကာသထဲတွင်ထောင်နှင့်ချီသောပွဲစားများရှိသည်။ အားလုံးသည်၎င်းတို့၏ပလက်ဖောင်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်လိုကြသည်။ ပြနာကဘဏ္industryာရေးနယ်ပယ်မှာသိုးတွေ ၀ ံပုလွေတွေအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါ။
ထို့ကြောင့်သင်၏ဘဏ္ancesာရေးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားသောအရစ်ကျပေးအပ်ရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ အဲဒါကိုဆိုလိုတာက CySEC လိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အဖွဲ့ဆီကလိုင်စင်ကိုကိုင်ထားတယ်။ ဤသည်မှာစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည့်အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများမှထိုပိုက်ကွန်ကိုသင်အာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောပွဲစားများအားလုံးသည် CySEC မှအပြည့်အ ၀ လိုင်စင်ရရှိထားပြီးဂုဏ်သိက္ခာလည်းရှိသည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဂရုစိုက်ရန်ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်သောအခါသင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
သငျသညျထိုကဲ့သို့သောပြန့်ပွား, သြဇာ, ကော်မရှင်နှင့်ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေအဖြစ်အရေးကြီးသောမက်ထရစ်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဤအချက်များအားလုံးသည်သင်အတွက်အကောင်းဆုံးပွဲစားကုမ္ပဏီဖြစ်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်သရုပ်ပြအကောင့်များအသုံးပြုခြင်း၏တန်ဖိုးနှင့်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်ထားသောငွေများမဖြည့်မီပလက်ဖောင်းကိုသိရန်အခမဲ့စမ်းသပ်မှုများကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။
CySEC သည် 'ဆိုက်ပရပ်စ်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကော်မရှင်' အတိုကောက်ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆိုက်ပရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရှိသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးဘဏ္industryာရေးလုပ်ငန်းကိုစောင့်ကြည့်နေသည်
ကျွန်ုပ်၏ CySEC ပွဲစားစာရင်းကိုငွေသွင်းရန်ဘဏ်ငွေလွှဲကို အသုံးပြု၍ ရပါသလား။
သင်အများဆုံး CySEC ပွဲစားကုမ္ပဏီများနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်သတိပြုသင့်သည်မှာရိုးရာဘဏ်ငွေလွှဲသည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အနှေးဆုံးငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံအချို့လိုအပ်တယ်၊ ပလက်ဖောင်းအများစုမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်မောင်းနှင်ခွင့်လိုင်စင်လိုအပ်တယ်။ ထိပ်ပိုင်းတွင်၊ (နောက်ဆုံး ၃ လမှ) ကုန်ကြမ်းငွေတောင်းခံလွှာကဲ့သို့သောတရား ၀ င်စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူတစ်စောင်ကိုသင်ပို့ရပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ CySEC ပွဲစားသည်ပြတ်တောက်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်၏ပိုက်ဆံအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမည်လား။
မဟုတ်ပါ၊ သင်သည် CySEC ပွဲစားများကဲ့သို့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားကိုအသုံးပြုနေသရွေ့သင်၏ငွေသည်လုံခြုံမှုအနည်းငယ်ရှိလိမ့်မည် (အနည်းဆုံးမည်သည့်ပမာဏသည်သင့်အကောင့်၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ် ၉၀% အထိ)
အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားကဘာလဲ
အသစ်အဆန်းများ အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး CySEC ပွဲစားသည် Capital.com ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပလပ်ဖောင်းသည် သွားလာရန်လွယ်ကူပြီး ပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။